Sajhasabal.com | Homeयूट्युबमार्फत दुनियाँमै सबैभन्दा धेरै कमाइ गरे ७ वर्षीय बालकले, उनको कमाइ कति ?
यूट्युबमार्फत दुनियाँमै सबैभन्दा धेरै कमाइ गरे ७ वर्षीय बालकले, उनको कमाइ कति ?
सोच्नुहोस् त, एउटा सात वर्षको बच्चाले व्यवसायिक काम गर्न सक्छ? कमाउन सक्छ? कमाइ हाले पनि कति रूपैयाँ कमाउला?
यी सबको जवाफ दिएका छन् रेयान नामका बालकले जो मात्रै सात वर्षका छन्।
फोर्ब्स पत्रिकाले रेयानलाई सन् २०१८ मा संसारमै धेरै आम्दानी गर्ने यूट्युब स्टार भनेको छ। उनले यो वर्ष जुन १ तारिखसम्म करिब २ करोड २० लाख (२२ मिलियन) डलर कमाएको फोर्ब्सले जनाएको छ।
रेयान २०१७ मा पनि यो सूचीमा परेका थिए। रेयानको गत वर्षको कमाइ १ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी थियो। उनी धनाढ्य यूट्युब स्टार सूचीको आठौं स्थानमा थिए। यो वर्ष भने उनको कमाइ दोब्बर भएसँगै उनी एक नम्बरमा परेका हुन्।
यूट्युबका ‘स्टार’ को धनाढ्य सूचीमा करिब २ करोड १५ लाख डलर कमाएर जेक पल दोस्रो नम्बरमा परेका छन्। तेस्रो नम्बरमा २ करोड डलर कमाइ गर्ने ड्यूड परफेक्ट छन्।
यी सबैलाई सात वर्षका बालक रेयानले उछिनेका हुन्। उनी हरेक हप्ता यूट्युबमा खेलौनाको समीक्षा गर्छन्। उनको च्यानल ‘रेयान ट्योज रिभ्यु’ का भिडियो करोडौंपटक हेरिएका छन्। यो च्यानलमार्फत् उनले आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको ‘छुट्टै संसार’ लैजाने टिप्पणी विश्लेषकले गरेका छन्। सन् २०१५ बाट सुरु भएको उनको च्यानलका भिडियो हालसम्म २६ अर्बभन्दा बढी पटक हेरिएका छन्।
कम उमेरमा सबभन्दा धेरै कमाउनेमा रेयानका बारेमा धेरै जानकारी भने नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनी अमेरिकाका हुन् भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको बताइएको छ।
गत वर्ष रेयानकी आमाले अमेरिकी अखबार वासिङटनपोस्टलाई एक अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। त्यसमा उनले रेयानका बारेमा थोरै कुरा बताएकी थिइन्। ‘रेयान सानै उमेरदेखि खेलौनाको सौखिन थियो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘ऊ टिभी र यूट्युबमा आउने रिभ्यु हेर्थ्यो। तीन वर्ष छदैंदेखि उसको यसमा लगाव छ।’
रेयानको एउटै भिडियो ८० करोडभन्दा बढीले हेरेका छन्। मार्च २०१५ मा सुरु भएको उनको च्यानलमा एक करोड ७३ लाखभन्दा बढी फलोअर छन्। एजेन्सी